Shiinaha 606 / 400L-nylon wax nadiifiye joogta ah oo hooseeya ee warshad sameynta warqad iyo alaab-qeybiyeyaal | YUNFENG
606 / 400L-nylon wax nadiifiye iswaafajin hooseeya warshad sameynta warqad
Codsiga nadiifinta cufnaanta hoose Tani maalgashadayaasha ugu fiican ee mashiinka warqadda saxarka kartoonka ah, nadiifiyaha saxarada kartoonku waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu garaaco oo loo isticmaalo in lagu soo saaro daqiiqado yar yar, xumbo, caag ah iyo wixii la mid ah habka wax soo saarka saxarka. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa samaynta saxarka dib loo warshadeeyay iyo khadka wax soo saarka saxaarad ukun. Nooca cusub Nadiifiye hufan oo hufan YF Nadiifiyaha Nadaafadda culus waxaa badanaa loo isticmaalaa ka saarista wasaqda culus sida quruurux, bir duug ah, boodh iyo walxo waaweyn oo khad ah d ...
Codsiga nadiifinta cufnaanta hoose
Maalgashadayaashaani xulashada mashiinka waraaqda saxarka saxarka ah ee kaarboorka, nadiifiye saxarada kartoonku waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu garaaco ee loo isticmaalo in lagu soo saaro daqiiqado yar yar, xumbo, caag iyo wixii la mid ah ee habka wax soo saarka saxarka. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa samaynta saxarka dib loo warshadeeyay iyo khadka wax soo saarka saxaarad ukun.
Nadiifiye culus oo hufan
Nadiifiyaha Nadiifinta Cufan ee YF waxaa badanaa loo isticmaalaa ka saarista wasaqda culus sida quruurux, bir duug ah, boodh iyo walxo waaweyn oo khad ah nooc ka mid ah saxarka. Joogtada socodsiinta ugu sareysa waxay gaari kartaa 2%, yareyn kartaa luminta fiber, hagaajinta awoodda wax soo saarka, yareynta qaybaha loo baahan yahay iyo nambarada nadiifiye hufnaanta saafiga ah, taas oo ka fogaata isku soo ururinta ash ash qaybaheeda dambe. isku halaynta sare ee howlgalka lama hor istaagi doono.
Nooca YF400 / 600
Awoodda gudbinta ee hal qalab (l / min) 400-480
Heerkulka ugu sarreeya (ºC) 70
Max cadaadiska hawlgalka (Mpa) 0.4
Joogitaanka gudaha (%) ≤2%
Dhaqida socodka biyaha 20-60l / daqiiqo
Taxane sare YF600 hufnaanta culus culus baabi'iyaha waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa dhammaan noocyada saxarka si nadiifinta hadhaaga iyo kala soociddeeda, waa noocyo kala duwan oo qalabka isbarbar-dhigga ah iyo is-beddelka farsamada ee xulashada koowaad ee qalabka ka saarista slag.
Mabda 'iyo qaab-dhismeedka nooca Fududeynta nooca' YF600 '
1. Qaab dhismeed kala qaybsan
Nadiifiyaha qaab dhismeedka kala qeybsan, Nadiifiyaha oo dhan waxaa loo qeybin karaa 3-4 qaybood, si sahlan loo kala furfuro loona beddelo.
2, siyaabo kala duwan oo dheecaan ka soo baxa ah
Marka loo eego baahiyaha kala duwan ee dadka isticmaala si ay u doortaan siyaabo kala duwan oo ah dheecaanka slag, si ay ula qabsadaan deegaanka shaqada isticmaalaha.
3, dhoobada dhoobada u adkeysata dhoobada
Qaybta hoose ee koorta ee kala-goynta slag waxay qaadataa biiyaha dhoobada-celiska ah, ee aan kaliya hubineynin heerka dheecaanka xasiloonida deggan laakiin sidoo kale dheereeya nolosha adeegga.
Shirkadda iyadoo loo eegayo habka kala geddisan ee kala geddisan iyo baahiyaha kala duwan ee adeegsadaha si loo bixiyo qaabab kala duwan, qeexitaanno kala duwan oo afka dhoobada dhoobada ah laga sameeyo.
4. Tuubbo kasta oo slurry ah waxay kuxirantahay tuubada laanta slagger, waxayna ku qalabeysan tahay waalka si loo fududeeyo isticmaalka jilicsan ee nidaamka oo dhan ilaa hal slagger.
5. Ma jiro qaybo dhaqaaqa, hawlgal xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
Astaamaha qaabdhismeedka gaarka ah ayaa ka dhigaya nadiifiyaha culus inuu leeyahay astaamaha soo socda:
1, wuxuu si wax ku ool ah uga saari karaa qulqulka ciidda, quruuruxa, silig birta ah iyo wasaqda kale ee culus;
2, kordhi qadarka iyo awooda dheellitirka oo sii kordheysa, yaraynaysa luminta fiberka;
3. Hawlgal xasilloon
Inta lagu jiro hawlgalka, waxay soo saari kartaa qaab dheecaan leh oo xasilloon, kaas oo si wax ku ool ah oo isdaba joog ah uga saari kara wasakhda.
4. Saamayn badbaadin slurry muhiim ah.
Hore: Xirashada tayada wanaagsan iyo daxalka u adkeysta 95 alumina dhalada giraanta dhoobada
Xiga: centri-nadiifiye Ka saar xoqida ka hor inta aan la xoqin oo la shaandheeyo isticmaalka waraaqaha
nadiifiye joogto ah oo hooseeya
Nadiif Waraaqaha Nylon